जापानको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा सुगा निर्वाचित - नेपालबहस
| १४:४१:२९ मा प्रकाशित
३१ भदौ, टोकियो । जापानको सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्रयाटिक पार्टीका प्रमुख योशिहिदे सुगा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन । जापानको संसदमा बुधबार भएको निर्वाचनमा उनी अत्यधिक मतका साथ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् ।
जापानको संसदमा अहिले सुगाले नेतृत्व गरेको पार्टीको बहुमत रहेकाले पनि उनले संसदमा भएको निर्वाचनमा अत्यधिक मत पाएका हुन । किसानको छोरा सुगा अहिले ७१ बर्षको भएका छन । उनी सन् १९९१ मा प्रधानमन्त्री बनेका किचि मियाजावापछि सवैभन्दा पाको उमेरको प्रधानमन्त्री भएका छन ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा निर्वाचित भएपछि उनले देश र जनताको लागि काम गर्न आफु सँधै प्रतिबद्ध रहेको बताए । “मेरो लगाव सवै देश र जनताका लागि हुनेछ, म त्यसैका लागि काम गर्नेछु,” उनले भने। उनले आफुले सवैभन्दा बढी प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको लडाईमा दिने र जापानी अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने बताए । त्यसका लागि सवैको तर्फबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
उनको मन्त्रीपरिषद्मा पूर्व अर्थ मन्त्री तारो असो र विदेश मन्त्री तोशिमित्सु मोतेगी दोहोरिने संभावना देखिएको छ । सुगाले यसअघि लिएको मन्त्रीपरिषद्को मुख्य सचिवको जिम्मेबारी भने तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री कत्सुनोबु कातोले पाउने अपेक्षा गरिएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको अति निकटस्थ पात्रका रुपमा रहेका सुगालाई यसअघि गत सोमबार उनी पार्टीको प्रमुखमा निर्वाचित गराइएको थियो ।
सुगाले आबे नेतृत्वको सरकार रहेका बेलामा सरकारको मुख्य प्रवक्ता र मन्त्रीपरिषद्को मुख्य सचिवका रुपमा जिम्मेबारी निर्वाह गरेका थिए । गत सोमबार भएको पार्टी भित्रको निर्वाचनमा उनले ३७७ मत प्राप्त गरेका थिए । उनीसँग प्रतिश्पर्धा गरेका पूर्व विदेश मन्त्री फुमिओ किशिदाले ८९ र पूर्व रक्षा मन्त्री शिगेरु इशिबाले ६८ मत मात्रै प्राप्त गरेका थिए ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री आबेले केहीदिन अगाडि अस्वस्थताको कारण देखाउदै प्रधानमन्त्री पद त्यागको घोषणा गरेका थिए । उनी शुरुमा सन् २००६ देखि २००७ सम्म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यतिबेला पनि अस्वस्थतालाई कारण देखाउदै पद त्याग गरेका आबे स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि सन् २०१२ मा फेरी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचत भएका थिए । त्यसपछि केही दिन अगाडिसम्म उनी लगातार प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
जापानमा सवैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बनेको नेताका रुपमा रहेका ६५ बर्षिय आवेले आफ्नो कार्यकाल अझै झण्डै एक बर्ष बाँकी रहेकै बेलामा राजीनामा दिएका हुन । उनले सरकारको नेतृत्व गरेका बेलामा सुगाले अति निकट भएर उनीसँग काम गरेका थिए । जापानमा अहिलेपनि आबेलाई अति लोकप्रिय नेताका रुपमा लिइने र पार्टी भित्र पनि उनको प्रभाव अत्यधिक धेरै भएको छ । एजेन्सी /एपी÷एएनआई
मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनमा ओली र प्रचण्डबीच मतान्तर ७ दिन पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीको युवराज मोह १ हप्ता पहिले
बलत्कारीलाई सार्वजनिक चोकमा झुण्ड्याएर मार्नुपर्छ: पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री १ हप्ता पहिले
ओलीको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नै नक्कली १ हप्ता पहिले
बालबालिकाको हक, हित र संरक्षणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : प्रम १ हप्ता पहिले
जापानमा ६.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प २ हप्ता पहिले
आईपीएलमा २०० छक्का हान्ने चौथो खेलाडी बने रोहित ५ घण्टा पहिले
महाराष्ट्रमा भवन भत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या ३९ पुग्यो ६ घण्टा पहिले
साफका सबै उमेर समूहका प्रतियोगिता स्थगन ६ घण्टा पहिले
सन्ध्यकालिनमा अकला मन्दिर ८ घण्टा पहिले
सिन्धुपाल्चोक र बाग्लुङलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय ९ घण्टा पहिले
कोलकोत्ताले टस जित्यो, मुम्बईलाई व्याटिङको निम्तो ९ घण्टा पहिले
स्याङयोङ्ग गाडीको ‘सुपर डिस्काउन्ट’ योजनामा अफरै अफर ९ घण्टा पहिले
२० बर्षिया बुहारीमाथि महिनौंदेखि ससुराको बलात्कार ! १२ घण्टा पहिले
श्रीमानले बलात्कार गरेको पुनमको आरोप, प्रहरीमा उजुरी ! १२ घण्टा पहिले